online မင်းသား: ကွန်ပြူတာကိုအလှဆင်ကြမယ်
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ကွန်ပျုတာ Screen ကို အသဲပုံလေး ပန်းလေးတွေနဲ့အလှဆင်ကြည့်ရအောင်နော် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် စမ်းသပ်ကြည့်နော် အရမ်းလှတာ ထက်ထက်စမ်းသပ်ပြီးပြီ ..လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို အောက်မှာပုံလေးနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ် အရင်ဆုံး Software လေးကိုဒေါင်းလိုက်ပါနော်.. ဒီနေရာလေး ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ..ပြီးရင် Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ မိမိရဲ့ ကွန်ပျုတာ Screen မှာ အသဲပုံနဲ့အတူး ပန်းလေးတွေ အများကြီး ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ပြီးရင် ဘောက်စ်တခုထွက်လာပါလိမ့်မယ် အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ ...
Hearts and flowers setting ဆိုတဲ့ဘောက်စ်လေးမှာ အသဲပုံလေးကို အနည်းအများ ဒါမှမဟုတ် အသဲပုံလေးတွေအများကြီးထွက်လာအောင် ကိုယ်ကြိုက်သလောက် ချိန်လို့ရပါတယ် ကိုယ်ကြိုက်သလောက်ချိန်ပြီးပြီဆိုရင် ဘောက်စ်လေးကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ထပ်ဘောက်စ်တခုထွက်လာ ပါလိမ့်မယ်နော် အဲဒီမှာ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ...
အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် မိမိရဲ့ကွန်ပျုတာ Screen ပေါ်မှာ Hearts and flowers ဆိုတဲ့ Software လေးရောက်ရှိသွားပါပြီနော် Screen ပေါ်မှာ အသဲပုံလေးနဲ့ပန်းလေးတွေ လှုပ်ရှားနေပါပြီနော်
ကိုယ်က အသဲပုံလေးတွေကိုမလိုချင်တော့ဘူး ပိတ်လို့ရပါတယ် အသဲပုံလေးတွေကို ဖွင့်ချင်တယ် ပိတ်ချင်တယ် ဆိုရင်အောက်ကပုံလေးမှာကြည့်လိုက်နော်...
သူငယ်ချင်းတို့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် ထက်ထက်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးလို.တင်ပေးလိုက်တာပါ အားတဲ့အချိန်ရှိရင်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်နော်...
(သူငယ်ချင်း ထက်ထက်က ပို.ပေးထားတာ ကြာပါပြီ..online အလုပ်မအားသေးလို. အခုမှတင်ဖြစ်တာပါ)
တင်သွင်းသူ online မင်းသား at 21:42
အိမ်မက်ကောင်းကင် 10 September 2012 at 22:25
ကွန်ပျုတာ ကိုအလှဆင်လိုက်ဦမယ် လှလာမလားလို့ :P
Anonymous 15 December 2013 at 06:27
မိမိရဲ. password ကလုံခြုံမှု.ရှိရဲ.လား
ကာရာအိုကေဆိုလို.ရတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ..(အရမ်းမိုက်တယ်..online အကြိုက်ပေါ့..)
Gtalk က ဓာတ်ပုံကို slideshow ပြမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ...
ကိုယ်သေရမဲ့အချိန်ကို သိချင်ရင် ကြည့်လို.ရပါတယ်...
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ကွန်နက်ရှင်အားကိုပြပေးတဲ့ မီတာဒိုင်ခွက်လေးပါ
သီချင်းလေးတွေကို code အဖြစ်ပြောင်းပေးတဲ့ ဆိုဒ်လေးနော်
online မင်းသား - နည်းပညာ blog
online မင်းသားကို အီးမေးလ်ကတဆင့် နည်းပညာများ၊ကိုယ်ပိုင်ကဗျာများ ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်...သူငယ်ချင်းတို.ရဲ.နာမည်နဲ.တကွ ပို.စ်တင်ပေးသွားမှာပါ...
ပုံ (သို.) software ပို.ပေးချင်ပါက
Browse ကိုနှိပ်ပြီး လိုချင်သည့်ပုံ (သို.) software ရွေးပေးပါ
online မင်းသား ဘလော့ခ်လေးအပေါ် သူငယ်ချင်းရဲ.အမြင်
Submit ဆိုတဲ့စာတန်းကိုနှိပ်ပေးပါရန် အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူငယ်ချင်း
♪♪online မင်းသား♪♪ဘလော့ခ်လေးမှာ သီချင်းလေးတွေနားထောင်သွားဦးနော်...
* email လိပ်စာထည့်ပြီးလျှင် Submit ကို နှိပ်ပါ
* ပေးထားသည့် code နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး
Complete subscription Request ကို နှိပ်ပါ
* Feedburner မှ သင့်ထံမေးလ်ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
* အဆိုပါမေးလ်ကိုဖွင့်ပြီး အပြာရောင် Activate Link ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
* Email Subscription Confirmed! လို့ အတည်ပြုပြီးတဲ့ စာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
* ဒါဆိုရင် online မင်းသားဆိုဒ် တွင်အသစ်ရေးသမျှကို လာကြည့်စရာမလိုပဲ မေးလ်ထဲကိုချက်ချင်းပို့ပေးပါမည်။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းတို. ..မတွေ.တာကြာပြီနော်..online လည်းပို.စ်မတင်တာကြာသွားတယ်... အဲဒီအတွက် အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်...ကဲ..ဒီတော့ အခုတင်ပေး...
ပြန်သိမ်းဆည်းမရသော ရှောင်သွားပါ ရွက်ကြွေ မယုံရဲဘူး အချိန်တွေနှောင်းခဲ့ပြီ ပျော်တော်ဆက် ပျောက်ရှသွားခဲ့ ပြိုင်ပွ...
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ကွန်ပျုတာ Screen ကို အသဲပုံလေး ပန်းလေးတွေနဲ့အလှဆင်ကြည့်ရအောင်နော် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် စမ်းသပ်ကြည့်နော် အရမ်းလှတာ ထက်ထက်စမ...
အချစ်လေပြေ ဖြေစရာမလို အချစ်နဲ.ချောကလက် တစ်ခါတစ်လေ မှားသွားခဲ့ပြီ အခွင့်မရှိ ငါ့အားစီရင် အလွမ်းများပြီး အမြဲတမ်းအတွက် အခ...
online လည်း ဘာမှမတင်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာပြီပေါ့..အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်.. ကဲ..အခု သူငယ်ချင်းအားလုံးကို အလန်းလေးတစ်ခုပေးမယ်ဗျာ... ဒီကော...
မေသက်ခိုင် ယုသန္တာတင် စံရတီမိုးမြင့်
လူညာကြီး အနားနားရှိတဲ့အခိုက် ရှော့ခ် ချစ်နေတုန်းပဲ ပျော်ပါစေ မင်းကုသ သေချာပြီလား တ၀ဲလည်လည် အရာရာပြောင်းလဲခဲ့ပြီ ကေ...
facebook နည်းပညာ (1)
flash song နည်းပညာ (1)
flash သီချင်း (1)
Gtalk/Gmail နည်းပညာ (13)
ip နည်းပညာ (1)
mp3/mp4 နည်းပညာ (5)
phone နည်းပညာ (7)
photoshop နည်းပညာ (1)
အွန်လိုင်း အဘိဓာန် (2)
Karaoke Anything Software လေးပါ
ကွန်ပျုတာကို 3D Leaves နဲ့အလှဆင်ရအောင်
..........မြန်မာဆိုရှယ်ဆိုဒ်လမ်းညွန်............. ဖူးစာရှင်လေး ဆိုဒ်သို. ရွှေမြို.တော် ဆိုဒ်သို. အရူးလွယ်အိတ် ဆိုဒ်သို. မီးအိမ်ရှင်များ ဆိုဒ်သို. ဧဒင်ဥယျာဉ် ဆိုဒ်သို. အနာဂတ်ကြယ်ပွင့်လေးများ ဆိုဒ်သို. အနောက်တိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ်ဆိုဒ် လပ်ကီးမြို.တော် ဆိုဒ်သို. စတော်ဘယ်ရီဝိုင် ဆိုဒ်သို. ချောကလက်မြို.တော် ဆိုဒ်သို. အနာဂတ်ကောင်းကင် ဆိုဒ်သို. ထာဝရသူငယ်ချင်းများ ဆိုဒ်သို. ပြတိုက် ဆိုဒ်သို. မြန်မာအိုင်တီနန်းတော် ဆိုဒ်သို. mm-flashsongs ...........ကဗျာဆိုဒ် လမ်းညွှန်................ swetty snow မြတ်နိုးသူ(MUFL) ပထမဆုံး ဧပရယ် ချစ်စံအိမ် လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် လေပြေချို စံပယ်ချို အိန်ဂျယ်လှိုင် နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ Text 10 Text 11 Text 12 .................ဖတ်စရာဂျာနယ်များ................. အင်တာနက်ဂျာနယ် Eleven ဂျာနယ် 7daynews ဂျာနယ် first-11 ဂျာနယ် အလင်းတန်း ဂျာနယ် ရွှေအမြူတေ ဂျာနယ် မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ် ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် Text9Text 10 Text 11 Text 12 ...............သတင်းဆိုဒ်လမ်းညွှန်.................. RFA သတင်း MRTV-3 သတင်း ဘောလုံးသတင်းများ မြန်မာ့သတင်းအစုံကြည့်မလား Text5Text6Text7Text 8 Text9Text 10 Text 11 Text 12 .................အကျိုးဆောင်.......................... အိမ်၊ခြံ၊မြေ ၀ယ်/ရောင်း/ငှား >ရွှေ၊ဒေါ်လာဈေးနဲ. အခြားဈေးနှုန်းများ ထီကို online ကနေတိုက်ကြမယ် ဘောလုံးပွဲအင်တာနက်ပေါက်ကြေးများ ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကြည့်မယ် Text6Text7Text 8 Text9Text 10 Text 11 Text 12
စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဟာ ဘောလ်ပင်တစ်ချောင်းကို အရမ်းမျှော်လင့်တောင့်တမိပါတယ်.... အဲဒီဘောလ်ပင်လေးဟာ သူနောက်ရေးမဲ့ဝထ္ထုတွေအတွက် အထောက်အကူပြုမဲ့ အားတစ်ခုပဲလေ... အဲဒီလိုပါပဲ.... blogger တိုင်းဟာလည်း comment တစ်ခုကို အရမ်းမျှော်လင့်တောင်းတမိပါတယ်... အဲဒီ comment လေးတစ်ခုဟာ သူနောက်ထပ်ပို.စ်တွေရေးဖို.အတွက် အကြီးမားဆုံး ပီတိအား ဖြစ်နေလို.ပါပဲ.... ဒါကြောင့် .......comment ပေးရင်း အားပေးကြပါလို. .......
Copyright © 2011 onlineမင်းသား. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.